Bankog oo laga diiday Ruqsada kaluumeysi oo uu soo saaro Gobolka Soomaalidu degto ee Puntland iyo Dooni iyo Shaqaale lagu heysto dalkaasi tailand | Somalisan.com kala soco wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya
Bankog oo laga diiday Ruqsada kaluumeysi oo uu soo saaro Gobolka Soomaalidu degto ee Puntland iyo Dooni iyo Shaqaale lagu heysto dalkaasi tailand
February 9, 2018 | Filed under: Wararka | Posted by: Somalisan News
Dooni sida sharci laga bixiyey deegaanada puntland oo lagu qabtay bankog
Dooni kalluumaysi oo leh ruqsad ay soo saartay gobolka Soomaalidu degto ee Puntland, oo magaceedu yahay Thailand Thotechai Navy 35, ayaa dhowaan lagu xiray Samut Sakhon iyadoo lagu tuhunsan yahay kalluumeysiga sharci darada ah iyo tahriibinta dadka, sidaana waxa Khamiistii ku dhawaaqay bilayska.
Shaqaalaha 22 ka mid ah Thais iyo hal Cambodiyan ayaa la xiray, 500,000 kiiloogaraam kalluun iyo noole kale oo badda laga helo.
Shirkii jaraa’id oo ka dhacay magaalada Bangkok, oo ah madaxa Lt-General Jaruwat Waisaya, oo ah madaxa Waaxda Arrimaha Sharciga iyo Diidmada, ayaa sheegay in doonta, oo madax ka ahaa Pawit Kerdsuwan, ay ka soo degtay dekedda Thakin Union ee Samut Sakhon si ay u dejiso kalluunka.
Shaqaalaha 22 ka mid ah Thais iyo hal Cambodiyan ayaa la xiray, 500,000 kiiloogaraam kalluun iyo nolol kale oo badda badda ah.
SVG kalluumeysatada horumarinta ayaa hore u codsatay maamulka in ay u oggolaadaan soo dejinta.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiishu waxay arkeen in doontu kaliya ay haysato oggolaansho kalluumeysi oo ka timid Puntland sidoo kale waxay jabisay xaddiga kalluunka ee 270,000kg oo kalluun, ayuu yiri Jaruwat.
Ka dib markii saraakiisha Thai ay gudbiyeen baaritaan, ayay mas’uuliyiinta Soomaaliya waxay ku jawaabeen in waddanku aanu u oggolaan doonin in ay kalluumaystaan ​​biyaheeda ayna ka diiwaan gashanayn nidaamka. Puntland waa caalam ahaan loo aqoonsan yahay qayb ka mid ah Soomaaliya, inkasta oo ay ku dhawaaqday xorriyadda 1998-kii.
Doontaasi ma aysan helin nidaamka maraakiibta ilaalinta ee sharci ahaan loo baahan yahay, ayuu yidhi Jaruwat. Bilayska ayaa dacwad sharci ah ku soo oogay dacwad ah in markab xamuul oo sharci-darro ah lagu soo geliyo biyaha Thailand oo aan fasax laga haysan, kaas oo lagu ciqaabi doono ganaax u dhexeeya Bt1 milyan iyo Bt30 milyan.
Kharashka ayaa lagu soo oogey Green Laurel International, qofkii sharciga ahaa ee loo diiwaangeliyey mulkiilaha markabka; Maamulayaasha Sare ee Saengsuk-eium iyo Surakan Saengsuk-eium; nin kale oo loo aqoonsaday inuu yahay milkiilaha dhabta ah, Wanchai Saengsuk-eium; iyo SVG Kalluumeysiga Horumarinta, ayuu yiri Jaruwat.
Labada Supachote iyo Wanchai ayaa isdifaacay bilayska todobaadkii hore, iyagoo beeniyay eedaymaha iyo in ay ku dhaarin doonaan maxkamad, ayuu yiri Jaruwat. Surakan ayaa ku fashilmay in ay la kulanto booliska ka dib markii loo yeeray labaad, iyada oo sheegtay in ay xanuunsan tahay oo balan qaaday in ay is dhiibayaan jimcihii, ayuu yiri Jaruwat.
Shaqaale Kamboodiyaanka ah oo lagu qabtay doonta ayaa u sheegay booliska in uu ka soo baxsaday xaalad adag oo shaqeynaya markab kale oo magaciisa lagu magacaabo Chotechai Navi 55 waxana uu qafaalatay markabkii Chotechai Navy 35 inuu ku laabto Thailand. Mas’uuliyiinta Thailand ayaa horay ugu soo celiyay Cambodia.
Tayada ayaa waday olole joogto ah oo lagula dagaallamayo kalluumeysiga sharci darada ah, aan sharci lahayn (IUU) tan iyo markii lagu dhuftay Midowga Yurub oo leh “jaale jaalle ah” wixii khuseeya waxyeellada ka dhex abuuran kalluumeysiga.